Madaxweyne Farmaajo oo ku dhawaaqay Saddex maalmood ah oo Baroor diiq Qaran ah | SAHAN ONLINE
Madaxweyne Farmaajo oo ku dhawaaqay Saddex maalmood ah oo Baroor diiq Qaran ah
MUQDISHO – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed cabdullaahi Farmaajo ayaa ku dhawaaqay sadex maalmood oo baroor diiq qaran ah oo ku aaddan musiibadii qaran ee ka dhalatay qaraxyadii argagixisada ahaa ee lala beegsaday goobo ganacsi oo ku yaalla isgooyska Soobbe iyo Laamiga Ceel Qalow ee magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha ayaa ka tacsiyeeyay dhammaan dadkii rayidka ahaa ee ku nafwaayey qaraxyadaas. Isaga oo Alle uga baryey in uu fadhigooda ka yeello Janada maadama ay ahaayeen dad rayid ah oo aan waxba galabsan kuna howlanaa nolashooda maalin laha ah.
Weerarkaan waa musiibo qaran oo aan ku waynay muwaadiniin aan waxba galabsan. Sidaas darteed, waxa aan ku dhawaaqaaya sadex maalmood oo baroordiiq qaran ah, calankana hoos loo dhigo”
Madaxweyne Farmaajo waxa uu ugu baaqay dhammaan shacabka Soomaaliyeed in ay gurmad deg deg ah u fidiyaan dadkii dhibaatadu ka soo gaartay qaraxyadaan argagixiso gaar ahaan dadka dhaawaca ah ee jiifa Hosbitaalada.
Qaraxyadaan waxaa lala bartilmaamsaday waddooyinka ugu mashquulka badan caasumadda, waxaa lagu beegay xilligii ugu saxmadda badnaa taas oo muujinaysa inta ay le egtahay cadaawadda ay u qabaan shacabka Soomaaliyeed, hadaba aan kaga guulaysanno midnimadeenna iyo wada jirkeena.”ayuu yiri Madaxweynuhu.
Madaxweyne Jamhuuriyadda ayaa ku amray laamaha ammaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya in ay jawaab cad ka keenaan qaraxaan isla markaasna ay kor u qaadaan howlgallada lagu xaqiijinaayo ammaanka muwaadiniinta.